Driver | Great Wall Group of Companies ﻿
•	Mandalay မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး နယ်ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။
•	မိမိတာဝန်ယူသောကား သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ရမည်။
•	မိမိမောင်းသောကားကိုစီးသူများအနေဖြင့် စိတ်ချလုံခြုံမှုခံစားရစေရန် ကြိုးစားရပါမည်။
•	အနည်းဆုံး အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။
•	ယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြံ (၅) နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
•	ကျန်းမာရေး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၅) နှစ် မှ (၅၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	လမ်းစည်းကမ်းယာဉ်စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location No.(79/F), Corner of Sein Pan Street & Ingyin Street,Bayint Naung Trading Compound,Yangon,Myanmar.
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Great Wall Group of Companies Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Manufacturing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon Region 718 Days